Kawaran hadaad qaadatid Viagra oo aadan ubaahanayn? | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | Lamaanaha iyo Galmada, Caafimaadka
Waxaad horey u ogtahay waxa Viagra iyo haddii aadan weli aqoon isaga, in Ragga Stylish Waan kuu sheegi doonnaa waxay ku saabsan tahay. Viagra waa magaca ganacsiga - oo si fiican loo yaqaan - kiimikada loo yaqaan Sildenafil. Kiimikadan waxay ku shaqeysaa iyadoo balaarineysa xididdada dhiigga ee ku jira xubinta taranka ee xubinta taranka. Dhiiggan ku soo qulqulaya guska, kacsanaan adag oo waara ayaa la soo saarayaa.
Sildenafil waa daroogada loo isticmaalo raggaas oo la ildaran dhibaatooyinka galmada sida kacsi la'aan ama kacsi la'aan. Hadda, markii la sii daayay daroogada, rag badan ayaa bilaabay inay isticmaalaan inkasta oo aysan haysan dhibaatooyinka aan soo sheegnay. Marka la eego ficilkan waxaan isweydiinay ... maxaa dhacaya haddii aad qaadatid Viagra uma baahnid?
Jawaabtu waa mid aad u fudud. Haddii wax walba sifiican u fiicnaadaan, Viagra kuma siin doono awood dheeri ah ama adkeysi. Sidoo kale maahan wax loo yaqaan 'aphrodisiac'. Taas bedelkeeda, haddii aad qaadatid Viagra oo aadan u baahnayn, waxaad yeelan kartaa waxyeelo aan loo baahnayn, sida madax xanuun, kabuubyo gacmaha iyo / ama lugaha, araga oo xumaada, wadno garaac iyo wixii ugu xumaa, dadka qaar, waxay kordhin kartaa halista shil wadnaha ama kacsiga xubinta taranka in ka badan 12 saacadood.
Dhibaatooyinka sixitaanka iyo cabirka xubinta taranka waa labada dhibaato ee ugu weyn ragga. Hadaad taas u maleyneyso guskaagu maahan cabirka ugufiican, hadda waad kordhin kartaa iyada oo aan khatar la gelin mahadnaqa buugayaga. Degsado Master of guska buugga adigoo gujinaya halkan
Mid ka mid ah sababaha nafsaaniga ah ee isticmaalka Viagra uu noo keeni karo waa ku tiirsanaanta, taasoo kaa dhigeysa mid aan macquul kuu aheyn inaad kacsato haddii uusan daawo la socon.
Markaa haddii aadan dhibaato ka haysanin koritaanka, ha u isticmaalin Viagra. Dawadani waxay caawin kartaa oo keliya ragga u baahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Kawaran hadaad qaadatid Viagra oo aadan ubaahanayn?
Ma aqaan waxa dhacaya haddii aadan qaadan viagra, laakiin maalintii dhaweyd waxaan arkay macluumaad xiiso leh oo ku saabsan viagra iyo ukunta prodrid, sida lagu sheegay daraasad Talyaani ah ukumo xumaaday ayaa beddeli kara viagra… hahahaha…. Baarayaasha ayaa rumeysan in hadda loo isticmaali karo in lagu beddelo viagra "Waxaan ogaanay in hydrogen sulfide uu xiriir la leeyahay kacsiga galmada," ayuu yiri Professor Giuseppe Cirino, oo ka tirsan Jaamacadda Naples Federico II, ... hada waad ogtahay ... hehehehehe
Ku jawaab Nisaa
Waxaan u sheegayaa aabbahay hahahaha ...
Waan qiyaasi karaa ... neef ukumo qurmay oo xun
Sidee loo daryeelaa dreadlocks?
Sidee loo sameeyaa muraayad 3D ah?